के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?
माघ १२ गते, २०७६ - २१:१२
काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै लामो समय रिक्त भएको प्रतिनिधिसभाले आइतबार मात्रै सभामुख प्राप्त गरेको छ । सभामुखमा नेकपाका स्थायि समिति सदस्य अग्नि सापकोटा निर्विरोध विजयी भएका छन् ।
सापकोटालाई सभामुख हुन नदिन आन्तरिक पार्टीदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले निकै चलखेल गरेका थिए । सम्पुर्ण चलखेललाई हराउँदै अन्ततः विपक्षी दलको समेत उम्मेदवारी नभई सापकोटा निर्विरोध रुपमा सभामुख हुन सफल भए ।
आन्तरिक पार्टीमा अबरोधको सिर्जना
सभामुख पुर्वमाओबादी खेमाबाट बनाउने औपचारिक सहमति भएसँगै सापकोटा प्रचण्डको पहिलो रोजाई बने । नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका अत्यन्त निकट र ईमान्दार सहयात्री हुन भन्ने पनि मानिन्छ ।
प्रचण्डको ईच्छा अभिव्यक्त भएसँगै नेकपाभित्र सापकोटालाई कुनै पनि हालतमा सभामुख बन्न नदिने खेलमा एउटा पङ्ति जोड तोडका साथ लाग्यो ।
सापकोटा सभामुख हुँदा एमसीसी पास गर्नेलगायत धेरै विषयमा असहज हुन सक्ने चर्चा नेकपाभित्र चलाइयो । प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति केन्द्रहरुमार्फत आग्रह गरियो ।
सकेसम्म सभामुखमा आफुले रोजेको मान्छे बनाउने र पुर्व माओबादी खेमाबाट बनाइए पनि आफुले रोजेको मान्छे बनाउन अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेको कुरा सतहसम्म नै आयो ।
तत्कालिन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न औपचारिक रुपमा निर्देशन दिने निर्णय गरेपनि आन्तरिक रुपमा हलो अड्काउनको लागि राजीनामा नगर्न भनियो, जसको कारण पुस ४ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशन एक महिनासम्म स्थगित हुँदै लम्बिरह्यो ।
सत्र भाईद्धारा राष्ट्रपति समक्ष निवेदन
अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्न विभिन्न एनजिओ र मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका कनकमणी दिक्षित, टिका ढकाल, दिनेश त्रिपाठी, टिकाराम भट्टराईलगायत १७ जनाले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति समक्ष निवेदन पेश गरे ।
सत्रभाइले निवेदनमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाउन नहुने र निर्वाचित प्रतिनिधि अभियोग रहित प्रतिनिधि हुुनुपर्ने भन्दै सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिने वातावारण तयार गर्न दवाव दिए ।
कनकमणीको नेतृत्वमा माईतिघरमा प्रदर्शन
अग्नी सापकोेटा सभामुख बन्ने निर्णय नेकपाले गरेपछि कनकमणीको नेतृत्वमा माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन शुरु गरियो । तर सामाजिक सञ्जाल र आम मिडियाले प्रदर्शनलाई वास्ता गरेनन् ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले माघको १० गते अग्नि सापकोटाविरुद्ध पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे ।
सापकोटाविरुद्ध माहोल बनाउन राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले समेत राजीनामा दिए । अन्ततः आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सापकोटा निर्विरोध सभामुख बन्न सफल भए । सापकोटा विरुद्ध भएका सबै खेल असफल भए । सापकोटा तथा पुर्व माओबादी खेमाका नेतालाई सभामुख बन्न नदिन पश्चिमाहरुले निकै हतकण्डा अपनाए ।
सापकोटाको आगमनले युद्धकालिन मुद्धालाई समेत किनारा लगाउने विषयमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ, र यो अवसरमा नेतृत्वले सहि भुमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा मौलिक ढंगले दिगो शान्तिको मुद्धा पुर्णतातर्फ जाने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
माघ १२ गते, २०७६ - २१:१२ मा प्रकाशित